I-Rosary evuyayo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuze ukwazi ukuthetha malunga Iimfihlakalo ezikhanyayo, Ubuhlungu okanye uthando kunye neemfihlelo ezizukileyo zobomi basesidlangalaleni bukaKristu kuya kufuneka ufunde ukuthandaza IRosari evuyayoKe ngoko, kwinqaku elilandelayo siza kukufundisa indlela yokuthandaza.
1 I-Rosary evuyayo inceda njani ekukhululeni umphefumlo?
1.1 Kutheni kubalulekile ukwazi imfihlelo evuyayo?
1.2 Iimfihlakalo zeRosari
1.2.1 Iimfihlakalo ezibuhlungu
1.2.2 Iimfihlakalo eziqaqambileyo
1.2.3 Iimfihlakalo eziZukileyo
I-Rosary evuyayo inceda njani ekukhululeni umphefumlo?
Ngaphakathi komthandazo wenkolo yamaKatolika, irosari Ngokukodwa, lo mthandazo wesintu unqula iimfihlakalo ezingamashumi amabini, zona ngokwazo zithetha ngobomi bukaYesu neNtombikazi enguMariya. Inkqubo ye- Ingcwele yeRosari Isetyenziselwa ukunceda inkumbulo kunye nokucengceleza imithandazo ngokusebenzisa ubuhlalu. Xa imithandazo iza kusetyenziswa kukunxibelelana noloyiso kububi oluboniswe kwiincwadi zeVangeli.
Xa sithetha ngeRosari eNgcwele, sikwabhekisa kuloo ndlela yenkululeko efunwa ngumphefumlo, kuba ibonisa ukuba umanyano esinalo nomama wethu wasezulwini, uMariya. Sidibanisa ngqo naye ukuze athandaze ecaleni kwethu, ukongeza koku kukukhusela esinokukusebenzisa ukutsala uxolo esilunqwenela ngokungapheliyo.
Ngokufanelekileyo iRosari inegalelo kubuhle esingabazi ngaphakathi kuthi. Ikwahamba nabantu ukuya kwinqanaba lokuthobeka elinikwa yiNtombikazi enguMariya kwaye ke kunciphisa ukohlwaywa kwethu ngenxa yezono.
Ukuthetha ngemithandazo egcinwa yiRosari kunye nezibonelelo zayo kukuthetha ngendlela amandla ayo anelisa ngayo ukukhokelela ekuphilisweni kwentliziyo. Kananjalo nokunikezela ukwamkelwa okuvela kuThixo apho ubukho bezidalwa zikaThixo ezihamba nathi kumzabalazo wentlupheko kunye nokuzalisekisa iinjongo zobomi esizinqwenelayo akunakuphikiswa kwaphela. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba sazi esi senzo sokukhumbula iimfihlakalo zeNtombikazi kaMariya noYesu.
Kutheni kubalulekile ukwazi imfihlelo evuyayo?
Iimfihlakalo ezivuyayo zazisa ngokufika kwengelosi kwiNtombikazi kaMariya. Ziyinxalenye ye- umthandazo wamakatolika yeRosari, ethi yona ibe yeyokuqala kuthotho lwezinto eziyimfihlakalo ezintlanu, yiyo loo nto ijongane nesibhengezo sokufika nobuntwana beNkosi yethu uYesu.
Ziyinxalenye ebalulekileyo yomthandazo wamaKatolika weRosari, kuba ukuba ngowokuqala uchaza esinye seziganeko ezibalulekileyo kwimbali. Ethetha ngendlela uThixo awathumela ngayo ingelosi uGabriyeli esixekweni esibizwa ngokuba yiNazarete ukuba inike iindaba kuMfazi Oselula owayeza kuba yiNtombikazi enguMariya, ngonyana awayeza kuba naye oya kuba ngulowo uthunyelwe nguThixo, ukongeza koko kuthi malunga nokuzalwa konyana kaThixo kwaye Konke oku kuyinxalenye esisiseko yolwazi lomntu.
Ukwazi imithandazo eyenziwa ngaphakathi kwiRosari eNgcwele kukodwa ngumyalezo obalulekileyo kwaye inzulu yeVangeli, ethi, kwiCawa yamaKatolika, ikholelwe ukuba inguMama kaThixo osikelelweyo. Usebenzisa ukukhuselwa kwakhe njengomama wabo bonke kwaye nguye esinokuthi sibeke kuye zonke iinkxalabo.
Uthotho ngalunye lweRosari eNgcwele luqulathe imixholo emihlanu enceda ukucamngca kuba zimele umzuzwana kubomi bukaYesu neNtombi Enyulu ethi, ngomthandazo, inxibelelanise amanqanaba abo obomi.
Ngokwesiko, i-rosari inikezelwe ekuqaqambiseni isimilo kunye nokubandakanywa kokuxabisa kunye nokucinga ngobomi boluntu obukhokelwe nguKrestu ebomini. Le miba ingabaluleka kwaye ityhile, yiyo loo nto sisazi ezi mfihlakalo zibalaseleyo.
Iimfihlakalo zentlungu zifundisa emthandazweni weNkosi ukuba yintoni ekufuneka ihambile kwinkqubo yokuthwesa isithsaba sameva, indlela uYesu awayefanele ukuhamba ngayo enomnqamlezo emqolo, ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kwakhe.
Iimfihlakalo ezibuhlungu zibonisa emithandazweni yabo ukuba u Yesu wathandaza njani, walila kwaye wabandezeleka ekwamkeleni ikamva lakhe. Idityaniswe nentliziyo kanina, uMariya, ebonisa ukuba uyasiqonda isizathu sokuba abe semhlabeni, kutheni ephila kwaye kutheni ezinikele njengendoda nanjengoThixo.
Kucacisiwe ukuba wayefuna ukubuyisa ubomi babo bonke abantu emhlabeni kwaye abakhusele kubo bonke ububi, kananjalo aphephe ukulingwa, egcina umsebenzi wakhe owawubandakanya usindiso.
Ukuzinikela kwiNtombikazi kaMariya.
KwiMfihlakalo zokuKhanya, ubhaptizo lukaYesu kuMlambo iYordan kuthethwa ngalo ngendlela ecace gca, apho wabona khona indlela awayezityhila ngayo iNkosi. Kananjalo bayathetha ngokushunyayelwa koBukumkani bukaThixo, obabuzalisa abakholwayo bakhe ngokubaluleka okukhulu.
Ithetha ngokuguqulwa nokwenziwa kumila kumbi kukaYesu kwiNtaba yeThabor, ngaphandle kokuyeka iziko le-Ekaristi kwiSidlo sokugqibela, njengemizuzu yakhe yokugqibela kunye nabo.
Ngesi sizathu, siyaqonda ukuba ngaphakathi kwemithandazo yezimfihlakalo ezikhanyayo kukho intetho yosapho oludumisa uThixo nendlela uYesu awadlula ngayo ukusuka ebusaneni ukuya endodeni. Ngendlela awawela ngayo amanzi ukuze akwazi ukufikelela elubhaptizweni kunye nokunxibelelana ngakumbi netempile kaYesu, ebonisa umfanekiso wakhe njengonyana kaThixo.
Iimfihlakalo zobuqaqawuli zithetha ngovuko lweNkosi, oko kukuthi, ithetha ngendlela esona siganeko sibaluleke kakhulu sokwenyuka kweNkosi. Kwakhona, ukubekwa kukaMariya oyiNtombikazi kunye nokufika koMoya oyiNgcwele kubapostile nakuMariya.
Ngaloo ndlela ngaphakathi komthandazo sibona ukuba uPetros wayephakamile kwaye wahamba ngovuyo ukuba aqonde indlela uYesu avuke ngayo nendlela awamkele ngayo uMama nabafundi bakhe bebona ukukhanya ezandleni zakhe. Kananjalo, isibonisa ngokucacileyo ukuba u Yesu wayeqonda ukuba nguye owayephethe ubulumko nazo zonke izipho ukongeza ekubeni luthando nokuzisa uthando lokuhlangula abantu kunye nokuphelisa yonke inzondo eyayikho, ngaloo ndlela eguqula yonke into. el mundo. Ukuba ulithandile inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: "IRosari yabafileyo ngeMigqibelo". Ndiyazi ukuba unokuba nomdla kwaye uza kulugcwalisa ulwazi.